Arsenal oo ku Dhawaaqday in Kabtankeedii Alexandre Lacazette uu ka Tegay | Dhaymoole News
Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa xaqiijisay, in kabtankeeda Alexandre Lacazette uu ka tegayo dhamaadka June oo uu ku egyahay qandaraaskiisa Emirates Stadium.
31 jirkan oo sannadkii 2017 ay Gunners kusoo iibsatay £47 milyan oo Gini ayaa diiday inuu cusboonaysii heshiiska uu kula jiro Arsenal, waxaana uu dib ugu noqonayaa waddankiisa Faransiiska.
206 kulan oo dhamaan tartamada ah oo uu u ciyaaray Arsenal ayuu u dhaliyey 71 gool, isaga oo kula guuleystay hal koob oo kaliya oo ah FA Cup.
Lacazette ayaa kabtanka kooxda ahaa tan iyo dhamaadka sannadkii hore markii masuuliyaddaas laga xayuubiyey Pierre-Emerick Aubameyang oo bishii Janury si xor ah ugu wareegay Barcelona.
Kulankii ugu dambeeyey horyaalka Premier League ayaa lagu sii macasalaameeyey Alexandre Lacazette, markaas oo isaga oo ooyaya uu ka baxay garoonka, hadda ayaanay kooxdiisa iyo isaguuba xaqiijiyeen inuu ka baxayo Emirates Stadium.
Qoraal uu ku daabacay bartiisa Instagram ayuu Lacazette ku yidhi: “Shan sannadood ka hor, riyadaydii ahayd in aan u saxeexo Arsenal ayaa ii rumowday.
“Sharaf ayay ii ahayd in aan xidho garankan oo aan qayb ka noqdo qoyskan. Waxa aan ku guuleystay koobab, waxa aan la kulmay dad wanaagsan, jacayl ayaanan ka helay kooxdan. Nasiib-wanaagsan ayaan kooxda iyo taageereyaashaba u rajaynayaa mustaqbalka.”
Tababare Mikel Arteta ayaa isaguna warbaahinta la hadlay, waxaanu yidhi: “Laca waxa uu noo ahaa ciyaartoy heersare ah.
“Waxa uu haa hoggaamiye dhab ah gudaha iyo bannaanka garoonkaba, waxaanu ciyaartoyda da’yarta ku lahaa saamayn muhiim ah.”
Agaasimaha farsamada Arsenal, Edu ayaa isaguna qoraal sagootin ah ku yidhi: “Aad ayuu qof kasta oo Arsenal ahi ugu mahad-celinayaa Laca. Muhiim ayuu noo ahaa. Mar walba qayb ayaad ka ahaan doontaa qoyska Arsenal, waxaananu kuu rajaynaynaa wax kasta oo wanaag ah mustaqbalka.”
Lacazette ayaa dib ugu noqonaya kooxdiisii carruurnimada ee Lyon oo uu hore ugu soo ciyaaray 275 ciyaarood ka hor intii aanu Arsenal imanin.